Araka ny Filazan’ny Indiana, Tamin’ny taona 1947 No Nitranga Ny Tena Brexit (Fialàn’ny Britanika) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jolay 2016 13:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, русский, Italiano, Español, Deutsch, English
Gazety The Hindustan Times, 15 Aogositra 1947. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Tamin'ny 23 Jona 2016, nandray anjara tamin'ny fitsapan-kevibahoaka iray manan-tantara ny olom-pirenen'ny Fanjakana Mitambatra (U.K) mba hifidy raha hijanona ho anisan'ny Vondrona Eoropeana (EU) izy ireo na tsia. Taorian'ny fampielezan-kevitra naharitra ela sy maresaka volana vitsivitsy lasa teo amin'ny mpiandany ny Mijanona sy mpiandany ny Miala, nanjaka ny Antokon'ny Fahaleovantenan'i UK tarihin'i Nigel Farage, izay 52% tamin'ny firenena no nifidy handao ny Vondrona Eoropeana.
Maro tamin'ny fampilezan-kevitry ny Miala no nifantoka tamin'ny ahiahy momba ny fifindra-monina fa tsy mba tamin'ny hevitra momba ny politika, ahitana an'i Farage mampiditra hevitra fa ny firohotra faoben'ny mpitsoa-ponenana mankao UK amin'ny alalan'ny sisintany misokatra an'ny Vondrona Eoropeana dia mety hiteraka fitomboan'ny heloka bevava sy ny fampihorohoroana ary fialàna amin'ny mari-panondroana azy ireo nentim-paharazana.
Ny UK no firenena voalohany niala tamin'ny Vondrona Eoropeana ary saika tsapa avy hatrany tao UK sy teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny fiantraikan'izany latsa-bato izany. Nilatsaka farany ambany indrindra ny lanjan'ny livra tao anatin'ny 31 taona raha manaisotra ny volany ao Britaina kosa ny mpampiasa vola noho ny sahoan-dresaka momba ny hoaviny ara-bola.
Satria mbola manohy miatrika ny sahoan-dresaka mampiahiahy momba ny dikan'ny Brexit amin'ny hoavin'ny toekarena Eoropeana sy ny fiantraikan'izany fanapahan-kevitra goavana izany eo amin'ny varotra manerantany izao tontolo izao, dia maro ireo firenena naneho hevitra manoloana ny vaovaon'ny Brexit tamin'ny fomba miavaka isan-karazany. Na dia teo aza ny tahotra amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka mitovy amin'izany [mg] ho amin'ny fahaleovantenan'i Delhi, dia nahita ny vaovao momba ny fiàlan'i Britaina tamin'ny Vondrona Eoropeana ho mampihomehy sy mampahatsiahy ny Brexit mitovy amin'izany izay nitranga tamin'ny 1947 tao amin'ny firenena kosa ny Indiana.
1948 :: Earl Mountbatten , Governora Farany Nandao An'i India #Brexit
Nahita ny fahatsapan'i Britaina amin'ny loza mitatao ny fiandrianana sy ny fanondroam-pirenena ho fihatsarambelatsihy goavana ny Indiana sasany noho ny fiheverana ireo firenena rehetra, anisan'izany i India, izay nanjakan'i Britaina nandritra ny tantarany. Ny Brexit Indiana dia ahitana ireo fikomiana sy fihetsiketsehana nandritra ny taonjato roa; ny fihetsiketsehana milamina notarihan'i Mahatma Gandhi no nanery ny Britanika hanome fahaleovantena ho an'i India tamin'ny 1947 sy nialany taty aoriana.
Niditra Twitter ny Indiana mba haneho esoeso vokatry ny latsa-bato Brexit ary niezaka hahatakatra ny fihetsiky ny ankamaroan'ny Britanika [nifidy hiala] manoloana ny fiarovana ny sisintany ao amin'ny firenena. Mpisera Twitter iray namintina ny fahatairan'i India tamin'ny fahatsoran'ny latsa-bato Brexit:
Mandritra izany fotoana izany, nipoaka fotsiny i India ka afaka mampiala an'i Britaina amin'ny latsa-bato ianao
Rohan, Indiana mpanao hatsikana monina ao Mumbai, nampitandrina ny Vondrona Eoropeana fa mety handray fepetra mitovy amin'ireo tetikadiny taorian'ny nialàny tao India i Britaina; izany hoe, ho entiny miaraka amin'izy ireo ny harena rehetra:
Ry namana Vondrona Eoropeana, raha misy firavakao any Britaina, fotoana mety izao hakàna izany indray.
Ny hafa tahaka an'i Derek Simon kosa manontany tena hoe nahoana ny olom-pirenen'i Britaina no matahotra fifindra-monina raha amin'ny ankapobeny izy ireo no tena mpifindra-monina.
Tsy hay ny tsy hieritreritra Brexit tsy mieritreritra momba ity [amin'ny sary].
Namintina ny fahatsapan'i India mikasika ny latsa-bato Brexit tamin'ny sioka iray monja ilay mpanao gazety Manu Joseph :
Ny Brexit tsara indrindra dia tamin'ny 1947
Tsy mahagaga, Indiana maro no nizara fihetseham-po mitovy, mihevitra fa ny latsa-bato tao Britaina dia tsy vitany hoe sambany fa mihatsara-velatsihy raha jerena ny tantaran'ny firenena nahitana fampahoriana sy herisetra.
Charu Sharma niezaka naminavina ny fiantraikan'ny Brexit ao India:
UK no mpampiditra loharam-bola betsaka indrindra ho an'ny orinasa Indiana. Ny ankamaroan'ny orinasa Indiana dia misafidy hametraka ny biraony ao Eoropa ao UK, mba hahazoana miasa tsara ao UK sy hahazoana tombotsoa amin'ny fijanonana ao Eoropa. Ny fanesorana izany vavahady izany dia hiteraka olana ho an'ny orinasa Indiana ao UK, izay mety hisafidy hamindra mivantana ny fampiasam-bola any amin'ny toeran-kafa.
Satria manomboka miomana amin'ny krizy ara-toekarena izay mety ateraky ny Brexit i Britaina, dia miomana amin'ny korontany manokana kosa i India. Na teo aza ny vazivazy momba ny latsa-bato eo amin'ny Indiana, marobe ireo tatitra momba ny fitotongan'ny toe-karena ao amin'ny faritra noho ny fiantraikan'ny Brexit mivantana sy ny fifampiresahana momba ny faritra Kashmir ihany koa aza – izay nifandroritana fatratra [mg] teo amin'i India sy Pakistan taloha ny zo ara-tsisintaniny – dia manomana ny fitapan-kevibahoakany manokana ho amin'ny fahaleovantenany [avy amin'ireo firenena roa tonta].
Raha heverina ho mampihomehy sy mampanseso ny Brexit tamin'ny voalohany, ny fiantraikany kosa — na ho an'i India na manerana izao tontolo izao — dia mety hitondra endrika vaovao amin'ny rafitra ara-politika manerantany araka ny ahafantarantsika azy.